समाचार - उल
साइकलको immediate द्रुत लाभहरू खोज्नुहोस्!
फेब्रुअरी 23, 2021
एक बाइक सवारी पक्कै अचम्मको छ। स्पेन वा विश्वको केही सुन्दर दृश्यहरू पेडल गर्दा तपाईको अनुहारमा हावा उडाएको अनुभव गर्नुहोस्। पढिरहनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् कि cy मुख्य फाइदाहरू के हुन् जुन तपाईले साइकलको दुनियामा सुरु गर्दा प्राप्त गर्नुहुन्छ!
भर्खरको स्की गगल्समा नयाँ Uller Snowdirft पत्ता लगाउनुहोस्!
फेब्रुअरी 16, 2021
हाम्रो संग्रह ULLER SNOWDRIFT® स्की गग्गलहरू यो दुनिया मा optics मा सबै भन्दा उन्नत प्रविधि संग बनेको छ! Iतिनीहरूले चुम्बकीय लेन्स विनिमय प्रणाली समावेश गर्दछ। के तपाईंलाई हाम्रो टेक्नोलोजी थाहा छ? यहाँ खोज्नुहोस्!
हाम्रो नयाँ Uller® BOLT खेल चश्मा खोजी गर्नुहोस् र खेल र साहसिक पेशेवरहरूका लागि बनेको छ, सँधै अधिकतम सान्त्वना र हल्कापनको खोजीमा जब दौड, साइकल, स्कीइ,, विन्डसर्फि and र अरू धेरै। तपाईंको खेल चश्मा तपाईंको साहस पूर्ण रूपले पूरक हो!
हामीले ध्रुवीकृत चश्माको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरूको समाधान गर्‍यौं!
Uller® बाट हामी तपाईलाई यो व्याख्या गर्न चाहन्छौं कि यसको मतलब के हो हाम्रो धूपको चश्मा ध्रुवीकरण गरिएको छ र हामी यो पनि वर्णन गर्दछौं कि यस प्रकारको ध्रुवीकरण गरिएको धूपको चश्मामा के-कस्ता फाइदाहरू छन् र किन तपाईंले तिनीहरूको सुविधाहरूको आधारमा तिनीहरूलाई छनौट गर्नुपर्छ। शंकाको साथ नबस्नुहोस्, यहाँ हामी ध्रुवीकृत सनग्लासको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छौं!
तपाईंको हिउँ दिनमा फोटोक्रामिक स्की मास्कहरू आवश्यक छन्!
Uller बाटSk स्किइ,, स्नोबोर्डि,, फ्रीरीडिंग वा कुनै बाह्य खेल गतिविधि अभ्यास गर्दा तपाईंको आँखाको रोशनीको रक्षा गर्न हामी फोटोक्रोमिक लेन्सहरूको साथ स्की मास्कको महत्त्व सिकाउन चाहन्छौं। फोटोक्रोमिक लेन्सहरूको साथ स्की गगल्सका फाइदाहरू पत्ता लगाउनुहोस्!
तपाईंलाई प्रख्यात आइमार नावारोको बारेमा यी ११ चीजहरू थाहा थिएन!
आयमार नावारो राष्ट्रिय फ्रिराइडका अग्रगामी हुन् जसले "अनन्त चिसो" मा बाँच्न खोज्छन्। भाल डी एरन स्कायर (र फायर फाइटर) पहिलो स्पेनिअर्ड थियो जसले फ्रिराइड वर्ल्ड टूरमा प्रवेश गरेका थिए, जहाँ विश्वका सर्वश्रेष्ठ फ्रीरिडरहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन्। यहाँ हामी तपाईलाई ११ वटा चीजहरू बताउँदछौं जुन तपाईंले उसलाई चिन्नुहुन्न!
यी सबै भन्दा राम्रो Aymar Navarro भिडियो हो!
आयमार नावारो संसारकै सब भन्दा महत्त्वपूर्ण फ्रिडरहरू मध्ये एक हो र हामी स्पेनमा सबैभन्दा उत्तम फ्रीरिडर हो। अरान उपत्यकामा जन्मेको उनको जीवन "अनन्त जाडो" को खोजीमा समर्पित छ। तीन वर्षको उमेरमा स्कीइ started्ग गर्न थालेको यो क्याटालान चरम चीजहरूको बारेमा ठूलो जोशिलोको रूपमा परिचित छ। के तपाईलाई पहिले नै यो फ्रिडर थाहा छ? यहाँ हामी तपाईलाई उनको सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब भिडियो ल्याउँछौं!
मिकाएला शिफ्रिन जिज्ञासाहरू र उनको सबै भन्दा राम्रो YouTube भिडियोहरू!
सेतो सर्कस को नयाँ रानी। यसरी नै मिकाएला शिफ्रिन विश्वव्यापी अल्पाइन स्कीइंगको विश्वमा परिचित छ। अमेरिकी स्कीयर मिकाला शिफ्रिनले उनी आफैंले राखेका सबै रेकर्डहरू तोड्न सफल भइन्। यहाँ हामी तपाईंलाई जिज्ञासा भन्छौं कि तपाईं उसलाई बारेमा थाहा छैन!
मिकाएला शिफ्रिन सेतो सर्कसको नयाँ रानी!
यदि हामी स्कीइ inमा महिलाको बारेमा कुरा गर्ने छौं भने हामी अमेरिकी मिकाला शिफ्रिनको बारेमा कुरा गर्न रोक्न सक्दैनौं जसले दुई ओलम्पिक स्वर्ण पदक, तीन वल्र्ड च्याम्पियनशिप, तीन सामान्य विश्व कप, World वल्र्ड कप स्ल्यालमको अनुशासनमा जितेका छन। जायन्ट स्लालोममा विशाल र अर्को। यहाँ हामी तपाईलाई सेतो सर्कसको रानीको बारेमा बताउँछौं!
हिमालहरूमा आधारभूत रोकथाम सल्लाहहरू इन्फोग्राफिक्स
Uller बाट® हामीले यी सुझावहरू हिमालहरूमा हुने जोखिमको रोकथामका लागि तयार गरेका छौं किनकि हामी चाहन्छौं कि हाम्रा सवारहरू र पेशेवर एथलीटहरू उनीहरूको मनपर्ने गतिविधिहरूको मजा लिन जारी राख्दछन् जबकि कुनै पनि प्रकारको जोखिमलाई रोक्दछन्। हाम्रो निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् र हिमालमा तपाईंको साहसको लागि पूर्ण तयारी गर्नुहोस्!
आयमार नावारो स्पेनमा सर्वश्रेष्ठ फ्रीडरर!
के तपाईंलाई थाहा छ अयमार नावारो को हो? कोही भन्छन् कि उनी स्पेनमा सब भन्दा राम्रो फ्रीडर छ, अरु भन्छन् कि उनी निस्सन्देह एक क्र्याक हो, तपाई के सोच्नुहुन्छ? ऊ अरन उपत्यकामा जन्मे र हुर्केको थियो र एक पेशेवर अफ-पिस्ट स्कीइंग भएको छ, एफटीडब्ल्यूमा प्रतिस्पर्धा गर्न आउँदैछ। आइमार नावारोको जीवनको रहस्य पत्ता लगाउनुहोस्, एथलीट सबैले कुरा गर्छन्!
ढलानहरू पहिल्यै खोलिसक्यो, हिउँ हाम्रो पर्खाइमा छ। र Uller® बाट हामीसँग कार्यमा जानको लागि सबै तयार छ। यो कारणले गर्दा हो कि हाम्रो डिजाइनरहरूको टोली जसले एकै समयमा फ्रिराइडको बारेमा जोशिला छन् नयाँ CORNICE स्की गग्गलहरू सिर्जना गरेका छन्। पत्ता लगाउनुहोस् किन ती तपाईंको लागि बनाइएको छ!
पहाड भन्दा परको स्वतन्त्रता ... प्रेरणा र साँचो फ्रेडरर्सको लागि ज्ञान!
पहाड चढ्ने स्वतन्त्रता हो यसको अधिकतम अभिव्यक्ति हो! यो लेख तपाईको स्वतन्त्र प्रेमीहरूका लागि हो जुन यस बर्ष भन्दा बढी चाहना हुन्छ उनीहरूको शिरामा एड्रेनालाईन भीड महसुस गर्न। हाम्रो पहाडी खेल सिफारिसहरूमा एक नजर राख्नुहोस् ... हामीसँग प्रेरित हुनुहोस्!
हामी जहिले पनि उत्तम तरिकामा सुसज्जित हुनुपर्दछ। हाम्रो दृष्टि र हाम्रो आँखालाई रक्षा गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, जबकि हामीले त्यहाँको मौसम अवस्थालाई अनुकूल बनाउनु पर्छ। एक्सचेन्जेबल लेन्सको साथ हाम्रो स्की गग्गलहरू पत्ता लगाउनुहोस्!
सबैभन्दा चरम डाउनराइटको शीर्ष १० भिडियो तिनीहरूलाई नहेर्नुहोस्!
केवल मुटुमा फ्रिडरहरूको लागि उपयुक्त! सबै चरम डाउनराइटहरूको यो शीर्ष १० भिडियोहरू मार्फत सबै एड्रेनालाईन, जोश र रमाईलो महसुस गर्नुहोस्। के तपाईं तिनीहरूलाई याद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? दुई पटक सोच्नुहोस् र यहाँ क्लिक गर्नुहोस्! हामीसँग यी अविस्मरणीय क्षणहरू पुन: जीवन दिनुहोस् जुन इतिहासको सबैभन्दा महाकाव्य र आइकनिक डाउनराइटहरूको सारांश गर्दछ ...
के तपाईंलाई स्की मास्क "द वाल" को हाम्रो नयाँ संग्रह पहिले नै थाहा छ? यो नछुटाउ! Uller खेल फेसन माFar कहिल्यै पछाडि हुँदैन। हाम्रो डिजाइनरहरूको टोली र फ्रिराइड, माउन्टेन खेलकुद र साँचो साहसिक कार्यको बारेमा उत्साहित, स्की मास्कमा नयाँ प्रवृत्ति ल्याउन कार्य जारी राख्दछ।